Wedding Jahannamo | LE PRÊCHEUR DU RETOUR DU ROI
Laga soo bilaabo September 23, 2017 On May 21, 2018
Marka la eego muhiimada iyo degdeg ah ee content ee kitaabkan lagu qoray waxaan go’aansaday halkii inay sameeyaan tafatir, daabacaadda iyo gebi ahaanba bilaash ah on blog ah.
Waxaan ka hadli doono waxa ay muujineysaa in nolosha aadanaha sannadihii la soo dhaafay.
Waxaan oo dhan ka arki kartaa in ammaan-darrada uu noqday dadkii badnaa maalin kasta caalamka oo dhan. Wars, rabshadaha, masiibooyinka, cudurro dillaaca, iyo abaar, oo luma qiimaha, gelyo xumada iyo dhibaatada ay ku soo rogeen on ama dadyowga oo dhan ka mid ah caalamka.
set Bad ah xaaladaha waxaa ay sababtay belaayooyinkiinnii oo dhan? Waxaan u muujiyo doonaa waxa gudcurka ku jira damiirka si qof fahamsan yahay in bixinta sababaha ka jirto dhammaan dhibaatooyinka ammaanka, kuwaas oo.
Durba xaqiijiyay in nolosha aadanaha ayaa udhaqaaqi doona sida ugu dhaqsaha badan waxa. Waxaa xaqiiq ah, waana arki doonaa kitaabkii waa maxay sababaha iyo cawaaqibta iyo sidoo kale waxa jira fursado la heli karo Dadka.
Maalin kasta oo ag maraaba, yabooha warbaahinta dunida, riyooyin iyo adduunka ka fiican sanadaha soo socda. Laakiin waxaan ka heli in nolosha keentaa noo gelyo xumada iyo ku jirto maalin kasta.
Waxaan idiin ku yeedhi si ay u helaan inta kale ee buugga ku dhex link in aad toosin doonaa bogga midig ee blog ee Faransiis. Waxaad turjumi karaa bogga buugga ee la pages turjumaan ee Internet Explorer « Crome » ama haddii kale ka.